6 Arrrimood Oo Ay Shiinaha Ku Aargoosan Karaan Dagaalka Ganacsiga – somalilandtoday.com
Dowladda Mareykanka ayaa ku hanjabaysa in ay dardargalin doonaan dagaalka ganacsi ee ay Shiinaha kula jiraan.
Mareykanka ayaa tan iyo 6 bishii July canshuur dhan 34 bilyan oo doolar ku soo rogay badeecooyiinka Shiinaha laga keeno.
Waxa ay sidoo kale Mareykanka sheegeen in canshuur dhan 200 oo bilyan oo doolar ay la bartilmaameedsan doonaan waxyaabaha Shiinaha laga soo dhoofiyo.
Mareykanka ayaa ku dhawaad afar jibaar ka soo iibsada badeecooyiin Shiinaha marka loo barbardhigo badeecadaha ay iyagu Shiinaha u iib geeyaan.
Marka Shiinaha ayaa haysta fursad yar oo marka ay ganacsiga timaado ay uga aargoosan karaan Mareykanka.
Balse Shiinaha waxaa u furan qaabab kale oo ay Mareykanka dagaal ganacsi kula gali karaan.
1.In ay tallaabo ka qaadaan shirkadaha Mareykanka.
Shirkadaha Mareykanka ayaa waxay gudaha Shiinaha ku iibiyaan waxyaabo ay soo saaraan taasi oo ay ka soo gasho lacag dhan $300 bilyan , marka Shiinaha ayaa waxay bartilmaamedsan karaan shirkadahaas, waxaa sidaasi sheegay Julian Evans-Pritchard oo ah khabiir dhanka dhaqaalaha.
Waxa uu carab baabay shirkadaha sida Apple, oo suuq balaaran ku leh Shiinaha islamarkana ka howlgasha.
Evans-Pritchard ayaa intaa ku daray in Shiinaha ay noolasha mid adag kaga dhigi karaan shirkadaha Maraykanka iyaga oo ka daahinaya ogolaanshiyaha canshuurta,dib u dhigaya amaba u diidaya codsiyada dal ku galka ama iyaga oo isticmaalaya arrimo la xiriira caafimaadka iyo badqabka taasi oo si kumeelgaar ah loogu xiri karo howlaha shirkadaha.
Gary Hufbauer oo ka tirsan xarunta dhaqaalaha caalamiga ah ee loo soo gaabiyo (PIIE) ee Washington ayaa sheegay in Shiinaha ay soo saari karaan shirkadaha Mareykanka ee aan sida wanaagsan isugu xirnayn islamarkana ay xeerar adag ku so rogi karaan.
2.Xaddidida dalxiisayaasha u dalxiis taga Mareykanka.
Inkastoo ganacsiga u dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanka uu yahay mid aan isu dheelitirnayn oo uu Shiinahu ka badan yahay ayaa haddana waxaa jira faa’dooyiin kale oo ay Mareykanka Shiinaha ka helaan.
Waxaa ka mid ah faa’idooyinkaasi lacagaha Mareykanka uga soo xarooda dalxiisayaasha Shiinaha ee Mareykanka booqda.
In ka badan 130 milyan oo shiinaha u dhashay ayaa sanaddii 2006 u safray meelaha ka baxsan Shiinaha.
Goobaha ay dalxiisayashani booqdeen waxaa ka mid ah Mareykanka oo isla sanadkaasi ay ku qarash gareeyeen lacag dhan 260 bilyan oo doolar.
Sidaasi darteed Shiinaha waxa ay xaddidi karaan dalxiisayaasha Shiinaha ee booqda Mareykanka.
Ma noqonayso markii ugu horreysay oo ay Shiinaha tallaabadaasi qaadaan.
Sanadkii aanu soo dhaafnay Shiinaha waxay dalxiisayaasha dalkeeda u diiday in ay u safraan Kuuriyada Koonfureed ka dib markii xukuumadda Seoul ay Mareykanka u ogolaatay in ay gantaalo dhigtaan dalkeeda.
Hasa yeeshee arrintani waa mid qalqal keeni karta.
“Tallaabooyiinkan dhibaato ayay u gaysanayaan dadka Shiinaha ayuu yiri,” ayuu yiri Mr Hufbauer s.
3. In qiimaha lacagta hoos loo dhigo
Hoos u dhigidda qiimaha lacagta Shiinaha ee yuan ayaa waxaay gacan siinaysaa dadka Shiinaha wax ka dhoofiya taasi oo badecooyiinka Shiinaha ka dhigaysa kuwa raqiis ah marka dalalka kale loo dhoofiyo, waxa ayna hoos u dhigaysaa sare u kaca qiimaha ay sababtay canshuurta Mareykanka.
Khubarada dhaqaalaha ayaa sheegaysa in xaqiiqada ah in bangiga dhexe ee Shiinaha uusan soo faragalin dhawaan markii hoos u dhaca ku yimid qiimaha lacagta ay tahay mid muujinaysa in arrinta ay u dhaafeen xoogaga suuqyada.
“Waxaa jira rabitaan fursad lagu siinayo in qiimaha lacagta ay hoos u dhacdo si loo yareeyo saamaynta ay canshuurta badan yeelan karto,” ayuu yiri Mr Evans-Pritchard oo ah khabiir dhanka dhaqaalaha ah.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage caption.
4. Maalgelinta Maraykan oo la iska iibinayo
Shiinaha waxa dowladda Maraykanku ku leedahay in ka badan hal bilyan oo dollar oo ah waraaqaha lacagta maalgelinta ah oo kale loo bixiyo ee marka dambe dulsaarka laga helo, taas oo dad qaar ka walaacsan yihiin inay dowladda Shiinaha siiso awood ay ku farageliso dhaqaalaha Maraykanka.
Laakiin haddii Shiinu ay iibsadaan maalgelin badan oo Maraykan ah, taasi waxay dhibaato ku noqon doontaa Shiinaha. Waayo? taasi waxay hoos u dhigaysaa qiimaha hanti ay Shiinuhu wax badan ka hayaan, waxayna u baahanaysaa inay meel kale u wareegto, suuqyada lacagta qalaad ku yar tahay.
Sidoo kale saameynta ay Maraykanka ku yeelanayso waxay u muuqataa mid xaddidan, maadaama deymanka Maraykanka ee Shiinuhu iibsado ay u badan tahay in waddammo kale iibsadaan.
5. Faragalinta wadahadahadalada Kuuriyada Waqooyi
Mr Trump ayaa sheegay in Shiinaha laga yaabo in ay faragaliyaan dadaalka Mareykanka uu ugu jiro sidii Kuuriyada Waqooyi looga dhigi lahaa oo ay uga talabixi lahayd hubka Niyukleerka.
Waxa uu dhawaan bartiisa Tweetar-ka ku qoray madaxwayne Trump in uu ku kalsoon yahay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu fulin doono heshiiskii ay gaareen ,balse waxa uu intaa ku daray in “Shiinaha laga yaabo in ay cadaadis saaraan heshiiska iyaga oo eegaya danahooda ganacsiga”.
“Waa kaarkan midka ay si sahlan u ciyaari karto dowladda Shiinaha taasi oo ah in ay u baaqaan Kuuriyada Waqooyi in ay bilaabaan wax sababi kara caqabad , ayuu yiri Mr Hufbauer.
6. In diirada ay saaraan dhaqaalaha gudaha
Shiinaha waxa ay diiradda saari karaan kobaca dhaqaalaha gudaha iyaga oo xaqiijinaya in ay haystaan aaladaha kobaca dhaqaalaha ee loogu talagalay xilliyada adag ayna ganacsigooda iyo maalgashiga ay ku sii balariyaan dalalka kale.
Mr Evans-Pritchard ayaa yiri “khiyaarka ugu wanaagsan ee looga jawaabi karo canshuuraha lagu soo rogay waa in ay dhaqaalaha kobciyaan.